トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "umlingo", iqabane iimvakalelo?
3500 yen kwintsingiselo
umsebenzi abaxeli-mathamsanqa of "umlingo" reverse isikhundla Bili wayambethe ngendlela
izinxibo zala ukufumana apreyizali free kukuthi, ezine ingqekembe ikrele-nekalamo evumba Cup kuyinto umlotha kwaye zithathwa kunye. Le phezulu wabo benza umlingo kukho uphawu ikhoyo ∞, ekuyeni ngasekunene ezulwini, uya aphethe evela yimbonakalo yomlilo, amanzi, umoya, ezweni izinto, ubuchule kunye amathuba ongenasiphelo sisondele kuThixo, okanye " kuye zachazwa emele mbumbulu ".
iingubo ezimhlophe iimvakalelo bili ecocekileyo, ibhatyi ebomvu kujongwe yokuziphatha, roses kunye negama angumoya ngoovulindlela, ekubeni luqhwemesha yaba yinyoka ngendlela esimelele iminqweno, benza umlingo ye ikhadi elitsha kwakhona ukumela imeko kwaye uqale.
intsingiselo yemeko ezakhayo iimvakalelo
Bili umntu you bili yemeko ezintle lumele kuthetha ukuba, ekuqaleni oluyintsusa, netalente, ubuchule, ithuba, ingqiqo, imele ukwazi ezifana kuwe. Ekubeni indawo ezintle benza umlingo akayi kuthetha ukuba kubalulekile ukuqhubeka ukwenza ehlokomayo kunjalo ke iimvakalelo ezintsha, kwimeko zombini Ndicinga ukuba abantu, elinye ipati kwikhompyutha elihle kakhulu ubuhlobo phakathi kwakhe nani , ibekwe kwiphondo iyenziwa kwetyala kunye imposiso ibe ngaphezulu ngabantu ababini ubudlelwane nzulu.
zama ukutshintsha izifundo badla ukuphola eyodwa, Toka ufuna ikushiye, ukuba yintoni isipho, Ndiyakuthanda ndicinga indlela onjengawe ixesha wonwabe. Ekubeni leqela kwakhona kusenokwenzeka ukuba ucinga ngokutshata nawe uthetha ngakumbi, ubuya kuba good'll kunandipha elona xesha lililo kunye nomnye umntu. Kwimeko abantu
uthando ezingabuyekezekiyo ke omnye umntu ofuna ukwazi ukuba ezinye zakho, isimo apho ukulunywa. Kuba yokucinga okanye Ndingenza ntoni ukuvala nawe, ungafuna ukuya evela ngakwicala kwenu. I elinye iqela nalo iyingcamango elungileyo ukuziphatha ngethemba nomdla kuwe.
wemi- Xa ummangali neemvakalelo
Bili yemeko ngasemva ikhadi kwindawo umva ibimele ukuba Kuchaza ngaphandle, elinye iqela limele urhulumente oko kukuthi i-clinical ngani. Ayikwazi themba izinto zakho, simele sizixhalabise ngekamva nawe. Kwimeko babini Ndicinga abantu, elinye iqela akakwazi kukuthemba, ndicinga ukuba Utomashiku ubudlelwane kunye nawe. Ekubeni kunjalo
okubi ekucingelwa ukuba ufuna ukuphelisa ulwalamano kunye nawe, ubuya kuba ngcono ukuba ayeke ebangela nokuziphatha ndlongo. Kwimeko abantu uthando ezingabuyekezekiyo, logama nje benza umlingo waya kwindawo esahlukileyo, umele isibakala ukuba unomdla. Kude inkanuko kuwe, ngenxa yokuba kunokwenzeka ukuba nkqu ithemba, kuya kuba ngcono ukuba bakhangele kwelinye icala.